Mifalia Amin’ny Asa Mafy Ataonao | Fitiavan’Andriamanitra
Mifalia Amin’ny Asa Mafy Ataonao
“Tokony ... hifaly noho ny asa mafy nisasarany ny olona rehetra.”​—MPITORITENY 3:13.
1-3. a) Ahoana no fiheveran’ny olona maro ny asany? b) Mampirisika antsika hanao inona ny Baiboly? Inona avy ny fanontaniana hodinihintsika?
MARO ny olona tsy tia miasa. Miasa mafy mandritra ny ora maro izy, nefa tsy mahafinaritra azy ny zavatra ataony. Tsy mahagaga raha miferinaina izy isaky ny handeha hiasa! Inona àry no hanampy azy ireny ho tia ny asany, ka ho afa-po amin’izany?
2 Mampirisika antsika ho tia miasa mafy ny Baiboly. Voalaza ao fa mahasoa ny asa sy ny vokatra azo avy amin’izany. Hoy i Solomona: “Tokony hihinana sy hisotro ary hifaly noho ny asa mafy nisasarany ny olona rehetra. Fanomezana avy amin’Andriamanitra izany.” (Mpitoriteny 3:13) Irin’i Jehovah ho afa-po amin’ny asantsika sy hifaly amin’ny vokatry ny fisasarantsika isika, satria tia antsika izy ary izay tena hahasoa antsika foana no tadiaviny. Mila manana ny fomba fiheviny sy mampihatra ny toro lalany momba ny asa àry isika, mba ho tiany foana.—Vakio ny Mpitoriteny 2:24; 5:18.
3 Handinika an’ireto fanontaniana efatra ireto isika ato amin’ity toko ity: Inona no hanampy antsika hifaly amin’ny asa mafy ataontsika? Inona no karazana asa tsy tokony hataon’ny Kristianina? Ahoana no hampifandanjana ny asa sy ny fanompoana an’Andriamanitra? Ary inona ilay asa lehibe indrindra azontsika atao? Hodinihintsika aloha ny modely nomen’ireo mpiasa roa mazoto indrindra, dia i Jehovah Andriamanitra sy Jesosy Kristy.
IREO MODELY TSARA INDRINDRA
4, 5. Ahoana no ampisehoan’ny Baiboly fa mazoto miasa i Jehovah?
4 I Jehovah no Mpiasa Faran’izay Mahay. Hoy ny Genesisy 1:1: “Tany am-piandohana, dia namorona ny lanitra sy ny tany Andriamanitra.” Rehefa avy namorona ny tany sy ny zava-drehetra eo aminy izy, dia nilaza fa “tena tsara” izany. (Genesisy 1:31) Afa-po tanteraka tamin’ny asany rehetra tetỳ an-tany izy! Azo antoka fa tena faly i Jehovah satria nisy vokany ny asa nataony.—1 Timoty 1:11.
5 Miasa foana io Andriamanitra mazoto io, araka ny nolazain’i Jesosy, ela be taorian’ny namoronana ny tany. Hoy izy: “Ny Raiko tsy mitsahatra miasa mandraka ankehitriny.” (Jaona 5:17) Inona no nataon’ny Ray? Any an-danitra izy, nefa azo inoana fa nitari-dalana ny olombelona sy nikarakara azy ireo foana. Nanao “zavaboary vaovao” koa izy, dia ireo Kristianina nateraky ny fanahy, izay hiara-manjaka amin’i Jesosy any an-danitra. (2 Korintianina 5:17) Niasa foana koa izy mba hanatanterahana ny fikasany hoe hiaina mandrakizay ao amin’ny tontolo vaovao ny olona tia azy. (Romanina 6:23) Azo antoka fa tena mahafaly an’i Jehovah ny vokatry ny asany. Olona an-tapitrisany mantsy no nanaiky ny hafatra momba ilay Fanjakana. Notaomin’i Jehovah hanatona azy izy ireo, ary niova mba ho tiany foana.—Jaona 6:44.
6, 7. Inona avy no mampiseho fa mpiasa mazoto efa hatry ny ela i Jesosy?
6 Mpiasa mazoto efa hatry ny ela koa i Jesosy. “Mpiasa tena mahay” izy talohan’ny naha olombelona azy, ary nanampy an’Andriamanitra tamin’ny famoronana ny zava-drehetra “any an-danitra sy etỳ an-tany.” (Ohabolana 8:22-31; Kolosianina 1:15-17) Tia niasa mafy koa izy tetỳ an-tany. Mbola kely izy dia nianatra asa momba ny fanorenana, ary “mpandrafitra” no nahalalana azy. * (Marka 6:3) Ilana tanjaka sy fahaizana isan-karazany izany. Mbola tsy nisy mantsy ny fitaovana elektrika sy ny orinasa mpanatsofa hazo ary ny fivarotana fitaovana. Alao sary an-tsaina ange i Jesosy mandeha maka ny hazo hiasany e! Izy mihitsy angamba no nikapa hazo sy nitaritarika an’izany tany amin’ny toerana niasany. Alao sary an-tsaina koa hoe manao trano izy, ka manomana sy mametaka ny hazo ipetahan’ny tafo, manao ny varavarana, ary manamboatra ny fanaka sasany mihitsy aza! Fantany tsara àry ny atao hoe afa-po amin’ny asa mafy sy voakaly tsara.
7 Tena nazoto niasa koa i Jesosy rehefa nanao ny fanompoany. Io asa tena lehibe io no nifantohany, nandritra ny telo taona sy tapany. Te hitory tamin’ny olona betsaka araka izay azo atao izy, ka nanomboka vao maraina ary nanohy hatramin’ny alina. (Lioka 21:37, 38; Jaona 3:2) “Nitety tanàna sy vohitra i Jesosy ... ka nitory sy nanambara ny vaovao tsaran’ny fanjakan’Andriamanitra.” (Lioka 8:1) Nahavita dia an-tongotra an-jatony kilaometatra tamin’ny lalana feno vovoka izy, mba hitoriana ny vaovao tsara.
8, 9. Nahoana no azo lazaina hoe nifaly tamin’ny asa mafy nataony i Jesosy?
8 Nifaly tamin’ny asa mafy nataony teo amin’ny fanompoana ve i Jesosy? Izany mihitsy! Namafy voan’ny fahamarinana momba ilay Fanjakana izy, ary efa masaka hojinjaina ny vokatra tatỳ aoriana. Nahazo hery sy tanjaka izy rehefa nanao ny sitrapon’Andriamanitra, ka nahavatra tsy nisakafo mihitsy mba hamitana azy io. (Jaona 4:31-38) Azo antoka fa tena afa-po izy rehefa nahavita ny fanompoany tetỳ an-tany, ka nilaza tamin’ny Rainy hoe: “Efa nanome voninahitra anao aho teto an-tany, satria vitako ny asa nasainao nataoko.”—Jaona 17:4.
9 I Jehovah sy Jesosy àry no modely tsara indrindra, satria nifaly tamin’ny asa mafy nataony izy ireo. Tia an’i Jehovah isika ka ‘manahaka azy.’ (Efesianina 5:1) Tia an’i Jesosy koa isika ka ‘manaraka akaiky ny diany.’ (1 Petera 2:21) Hodinihintsika àry hoe ahoana no ahafahantsika mifaly amin’ny asa mafy ataontsika.
INONA NO HANAMPY ANTSIKA HIFALY AMIN’NY ASA MAFY ATAONTSIKA?
Ho afaka hifaly amin’ny asa mafy ataonao ianao, raha manaraka ny toro lalan’ny Baiboly
10, 11. Inona no azontsika atao mba hananana toe-tsaina tsara?
10 Miasa isika Kristianina mba hivelomana, ary te ho faly sy ho afa-po amin’ny asantsika isika. Mety ho sarotra be anefa izany raha tsy azoazontsika ilay asa. Inona àry no hanampy antsika hifaly amin’ny asantsika?
11 Mila manana toe-tsaina tsara isika. Mety tsy ho azontsika ovana ny zavatra iainantsika, nefa afaka manova ny toe-tsaintsika isika. Hanana toe-tsaina tsara isika raha misaintsaina ny fomba fihevitr’Andriamanitra. Raha loham-pianakaviana ianao, ohatra, dia tadidio fa ahafahanao mamelom-bady aman-janaka ny asanao, na dia toa asa ambany aza. Tena zava-dehibe amin’Andriamanitra izany fikarakaranao ny ankohonanao izany. Milaza mantsy ny Teniny fa “ratsy noho ny tsy mino” ny olona tsy mamelona ny ankohonany. (1 Timoty 5:8) Tadidio àry fa fomba hanatratraranao tanjona ny asanao, satria manampy anao hanatontosa ny andraikitra nankinin’Andriamanitra taminao. Ho afa-po amin’ny asanao ianao raha mitadidy an’izany, fa tsy hitovy amin’ny mpiara-miasa aminao.
12. Inona no soa azon’ny olona mazoto miasa sy manao ny marina?
12 Tokony hazoto sy hanao ny marina isika. Handray soa isika, raha miasa mafy sy miezaka manao tsara ny asantsika. Tena tian’ny mpampiasa matetika ny mpiasa mazoto sy mahay. (Ohabolana 12:24; 22:29) Tsy maintsy manao ny marina koa ny tena Kristianina. Tsy mangalatra vola, na fitaovana, na fotoana amin’ny mpampiasa isika. (Efesianina 4:28) Hitantsika tao amin’ny toko teo aloha fa mahasoa ny manao ny marina. Azo inoana fa atokisan’ny olona ny mpiasa malaza ho manao ny marina. Ary na tsy voamariky ny mpampiasa aza fa miasa mafy isika, dia ho afa-po ihany. ‘Hanana feon’ny fieritreretana tsara’ mantsy isika, sady hampifaly an’ilay Andriamanitra tiantsika.—Hebreo 13:18; Kolosianina 3:22-24.
13. Inona no mety ho vokany raha tsara fitondran-tena isika any am-piasana?
13 Mila mitadidy isika fa afaka manome voninahitra an’Andriamanitra ny fitondran-tenantsika. Raha tsara fitondran-tena foana isika any am-piasana, dia tsy maintsy ho voamariky ny olona izany. Inona no ho vokany? Mety ‘handravaka ny fampianaran’Andriamanitra Mpamonjy antsika’ isika. (Titosy 2:9, 10) Rehefa tsara fitondran-tena tokoa isika, dia mety ho hitan’ny olona fa tsara ny fivavahantsika, ka hanintona azy kokoa. Mba eritrereto ange hoe misy mpiara-miasa aminao lasa liana amin’ny fahamarinana e! Manome voninahitra an’i Jehovah sy mampifaly ny fony mihitsy aza ny fitondran-tena tsaranao! Misy valisoa tsara noho izany indray ve?—Vakio ny Ohabolana 27:11; 1 Petera 2:12.
MAHAIZA MANAVAKA REHEFA HIFIDY ASA
14. Inona no afaka manampy antsika hifidy asa?
14 Tsy manome tsipiriany momba ny asa azo atao sy tsy azo atao ny Baiboly. Tsy midika anefa izany hoe azontsika atao daholo ny asa rehetra. Afaka manampy antsika ny Baiboly mba hifidy asa ara-dalàna sy mety amintsika ary mampifaly an’Andriamanitra. Manampy antsika tsy hifidy asa tsy ankasitrahany koa izy io. (Ohabolana 2:6) Misy fanontaniana lehibe roa ilaina hodinihina àry rehefa hifidy asa isika.
15, 16. Inona avy no fanontaniana lehibe ilaina hodinihina rehefa hifidy asa?
15 Zavatra raran’ny Baiboly ve no atao amin’ilay asa? Rarana mazava tsara ao amin’ny Tenin’Andriamanitra ny halatra sy ny lainga ary ny fanaovana sampy. (Eksodosy 20:4; Asan’ny Apostoly 15:29; Efesianina 4:28; Apokalypsy 21:8) Tsy hanao asa mitaky ny hanaovana an’ireo àry isika. Tia an’i Jehovah isika, ka tsy hanao asa mahatonga antsika handika ny didiny mihitsy.—Vakio ny 1 Jaona 5:3.
16 Mandray anjara amin’ny fanao ratsy ve aho, na mampirisika ny hafa hanao izany, raha manao an’io asa io? Ity misy ohatra: Tsy misy maharatsy ny asan’ny mpanao trano. Ahoana anefa raha asaina manamboatra fiangonana ianao? Marina fa tsy handray anjara mivantana amin’ny fivavahana atao ao ianao. Moa ve anefa izany asa izany tsy efa manohana ny fivavahan-diso? (Apokalypsy 18:4) Tia an’i Jehovah isika, ka tsy te hanao zavatra tsy araka ny Soratra Masina mihitsy.
17. a) Inona no ilaina hodinihina rehefa hifidy asa? (Jereo ilay efajoro hoe “ Hataoko ve Ilay Asa sa Tsia?”) b) Inona no tokony hataontsika raha tiantsika hanampy antsika hanapa-kevitra tsara ny feon’ny fieritreretantsika?
17 Maro ny zavatra manahiran-tsaina rehefa hifidy asa, nefa afaka manampy antsika hanapa-kevitra ireo fanontaniana lehibe roa etsy aloha. Misy zavatra hafa ilaina hodinihina koa anefa. * Tsy azo antenaina hoe hamoaka fitsipika momba ny zava-drehetra mety hitranga ny mpanompo mendri-pitokisana. Izany no ilantsika fahaiza-manavaka. Hitantsika tao amin’ny Toko faha-2 fa mila mamolavola ny feon’ny fieritreretantsika isika, izany hoe mianatra ny fomba hampiharana ny Baiboly eo amin’ny fiainantsika. Mila ‘mampiasa’ sy manazatra ny ‘fahaizantsika misaina’ isika. Hanampy antsika ny feon’ny fieritreretantsika amin’izay, ka handray fanapahan-kevitra mampifaly an’Andriamanitra isika ary ho tiany foana.—Hebreo 5:14.
HATAOKO VE ILAY ASA SA TSIA?
Toro lalana: “Ataovy ho voninahitr’Andriamanitra ny zava-drehetra.”—1 Korintianina 10:31.
Zavatra rarana mazava tsara ao amin’ny Baiboly ve no atao amin’ilay asa?—Eksodosy 20:13-15.
Mandray anjara amin’ny fanao raran’ny Baiboly ve aho, raha manao an’io asa io?—Apokalypsy 18:4.
Fanampiana olona fotsiny, toy ny asan’ny mpizara taratasy, ve ilay izy ary tsy raran’ny Baiboly?—Asan’ny Apostoly 14:16, 17.
Inona no ho vokany raha manao an’ilay asa aho? Hanafintohina olona ve izany?—Romanina 14:19-22.
Raha handeha hiasa any an-tany hafa aho ka handao ny ankohonako, inona no mety ho vokany eo amin’ny fihetseham-pon’izy ireo sy ny fifandraisany amin’i Jehovah?—Efesianina 5:28–6:4.
AHOANA NO HAHAIZANA MANDANJALANJA?
18. Nahoana no tsy mora ny manao ny fanompoana an’i Jehovah ho vaindohan-draharaha?
18 Ny fanompoana an’i Jehovah no tokony hataontsika vaindohan-draharaha. Tsy mora anefa ny manao an’izany amin’izao “andro farany” misy “fotoan-tsarotra tsy mora setraina” izao. (2 Timoty 3:1) Mety ho sarotra be mantsy ny mahita asa sy ny hateza amin’izany. Eken’ny tena Kristianina fa ilaina ny miasa mafy, mba hamelomana ny vady aman-janaka. Mety ho voahelingelina anefa ny fanompoantsika an’i Jehovah raha tsy mailo isika. Betsaka mantsy ny zavatra takina amintsika any am-piasana. Mora mifindra koa ny toe-tsain’ity tontolo matimatin-karena ity. (1 Timoty 6:9, 10) Inona àry no hanampy antsika handanjalanja, ka hamantatra “izay zava-dehibe kokoa”?—Filipianina 1:10.
19. Nahoana i Jehovah no mendrika ny hatokisantsika tanteraka? Inona no tsy hataontsika raha matoky azy isika?
19 Matokia tanteraka an’i Jehovah. (Vakio ny Ohabolana 3:5, 6.) Tsy mendrika ny hatokisantsika tanteraka tokoa ve izy? Miahy antsika mantsy izy. (1 Petera 5:7) Mahafantatra an’izay ilaintsika mihoatra noho ny tenantsika koa izy, ary tsy hahafoy antsika mihitsy. (Salamo 37:25) Tokony hanaraka an’izao toroheviny izao àry isika: “Aoka ny fomba fiainanareo tsy hisy fitiavam-bola, fa aoka ianareo hianina amin’izay efa eo. Fa hoy [Andriamanitra]: ‘Tsy handao anao mihitsy aho, ary tsy hahafoy anao velively.’” (Hebreo 13:5) Maro ny mpanompo manontolo andro afaka milaza fa tena mahay mikarakara izay ilaintsika Andriamanitra. Raha matoky tanteraka isika fa hokarakarain’i Jehovah, dia tsy hanahy be loatra hoe ahoana no hamelomantsika ny ankohonantsika. (Matio 6:25-32) Tsy avelantsika hanembantsembana ny fanompoantsika an’i Jehovah mihitsy ny asantsika, ka hahatonga antsika hanao tsirambina ny fitoriana sy ny fivoriana, ohatra.—Matio 24:14; Hebreo 10:24, 25.
20. Inona no dikan’ny hoe manana maso tsotra? Inona no hanampy anao hanana maso tsotra foana?
20 Aoka ho tsotra foana ny masonao. (Vakio ny Matio 6:22, 23.) Ny hoe manana maso tsotra dia midika hoe manao izay hahatsotra ny fiainana foana. Manana maso tsotra ny Kristianina iray raha mifantoka amin’ny tanjona tokana, izany hoe ny fanaovana ny sitrapon’Andriamanitra. Raha mibanjina tsara an’io tanjona io isika, dia tsy hanenjika asa be karama, na hikely aina mba hanana fiainana mirenty. Tsy ho variana mitady foana an’izay entana nivoaka farany sy izay tsara indrindra koa isika. Ataon’ny mpanao dokam-barotra mantsy izay hinoantsika fa mila an’ireny zavatra ireny isika mba ho sambatra. Ahoana àry no hananana maso tsotra foana? Aza mitrosa tsy amin’antony. Aza manangona fananana mandany fotoana be loatra sy mila fikarakarana be koa. Araho ny torohevitry ny Baiboly hoe mahaiza mianina amin’ny ‘hanina sy fitafiana ary fialofana.’ (1 Timoty 6:8) Tsory araka izay azo atao ny fiainanao.
21. Nahoana isika no mila mamaritra izay tena zava-dehibe, ary inona no tokony hataontsika loha laharana?
21 Izay zavatra mifandray amin’ny fanompoana an’i Jehovah no ataovy loha laharana ary tohizo foana izany. Ilaina ny mamaritra izay zava-dehibe satria tsy ho vitantsika daholo izay tiantsika hatao. Mety ho lanilany foana ny fotoana sarobidy ananantsika raha tsy izany, ka tsy ho vita izay tena zava-dehibe. Ny fianarana ambony no zava-dehibe indrindra amin’ny olona maro, satria te hahazo asa be karama izy. Nampirisika ny mpanara-dia azy anefa i Jesosy hoe: “Katsaho foana ... aloha ny fanjakany.” (Matio 6:33) Ny Fanjakan’Andriamanitra àry no ataon’ny Kristianina loha laharana. Ny asan’ilay Fanjakana sy ny sitrapon’ Andriamanitra no zava-dehibe kokoa amintsika, noho ny vola aman-karena sy ny asa ary ny zavatra hafa. Tokony ho hita eo amin’ny safidintsika sy ny tanjontsika ary ny zavatra ataontsika izany.
“FALY SY SAMBATRA AHO NOHO ILAY FANAPAHAN-KEVITRO”
“Nahay be aho, ka nahazo vatsim-pianarana hianarana tany amin’ny sekoly malaza iray eto New York. Nandresy lahatra ahy koa ny mpampianatra anay mba hanao fangatahana hiditra any amin’ny oniversite malaza maromaro. Nisy vitsivitsy nanaiky handray ahy, ary nahazo vatsim-pianarana tany amin’ny oniversite malaza indrindra eto Etazonia mihitsy aza aho. Nolaviko anefa izany, satria hitako fa mety ho voataona haloto fitondran-tena aho, raha mipetraka any amin’ny oniversite, lavitry ny fianakaviako. Tena te ho mpisava lalana koa aho.
“Efa 20 taona mahery aho izao no mpisava lalana maharitra. Maro ny karazana fanompoana efa nataoko: Nanompo tany amin’ny faritra nila mpitory bebe kokoa aho, ary nandray anjara tamin’ny fanorenana Efitrano Fanjakana sy ny fanampiana tra-boina. Miara-miasa amin’ny antoko-mpitory miteny vahiny eto New York aho izao, ary tena mahafinaritra ilay izy.
“Rehefa mieritreritra ny fotoana nanompoako manontolo andro aho, dia hitako hoe nahazo fitahiana be dia be aho. Faly sy sambatra aho noho ilay fanapahan-kevitro. Tsy hatakaloko na inona na inona mihitsy ny zavatra niainako tamin’izany sy ireo namana azoko!”—Zenaida.
MIASÀ MAFY EO AMIN’NY FANOMPOANA
Manaporofo ny fitiavantsika an’i Jehovah isika, raha ny fitoriana no ataontsika vaindohan-draharaha
22, 23. a) Inona no tena asan’ny Kristianina, ary ahoana no hampisehoantsika fa zava-dehibe amintsika io asa io? (Jereo ilay efajoro hoe “ Faly sy Sambatra Aho Noho Ilay Fanapahan-kevitro.”) b) Tapa-kevitra ny hanao inona isika?
22 Kely sisa dia horavana ity tontolo ity, ka mifantoka foana amin’ilay asa lehibe nankinina amin’ny tena Kristianina isika. Tsy inona izany fa ny fitoriana sy ny fanaovana mpianatra. (Matio 24:14; 28:19, 20) Io asa mamonjy aina io no imasoantsika, toy ny nataon’i Jesosy ilay Modelintsika. Ahoana no hampisehoantsika fa zava-dehibe amintsika izy io? Tena mahafoy tena manao an’io asa io ny ankamaroan’ny mpitory eo anivon’ny fiangonana. Misy mandamina ny asa aman-draharahany mba ho mpisava lalana na misionera. Maro koa ny ray aman-dreny mampirisika ny zanany hanompo manontolo andro, satria tsapany fa ilaina ny manana tanjona ara-panahy. Mifaly noho ny asa mafy ataony ve ny mpitory mazoto? Izany tokoa! Azo antoka fa ho faly sy ho afa-po ary hahazo fitahiana maro izay manompo an’i Jehovah amin’ny fo manontolo.—Vakio ny Ohabolana 10:22.
23 Maro amintsika no voatery miasa mandritra ny ora maro mba hamelomana ankohonana. Tadidio fa tian’i Jehovah hifaly amin’ny asa mafy ataontsika isika. Ho afa-po amin’ny asantsika isika, raha mampifanaraka ny toe-tsaintsika sy izay ataontsika amin’ny fomba fiheviny sy ny toro lalany. Ny fitoriana ny vaovao tsaran’ilay Fanjakana anefa no tena asantsika. Aza avela hampiala anao amin’izany mihitsy àry ny asa fivelomana. Manaporofo ny fitiavantsika an’i Jehovah isika sady ho tiany foana, raha io asa io no ataontsika vaindohan-draharaha.
^ feh. 6 Ilay teny grika nadika hoe “mpandrafitra”, dia ilazana “ny olona rehetra mpanamboatra zavatra amin’ny hazo, na zavatra hatao amin’ny trano izany, na fanaka, na zavatra hafa.”
^ feh. 17 Misy tsipiriany momba izay tokony hodinihina rehefa hifidy asa, ao amin’ny Tilikambo Fiambenana 15 Aprily 1999, pejy 28-30.
Ny Fitoriana Momba Ilay Fanjakana—Mitory Eran-tany ny Vahoakan’ilay Fanjakana